Sidee loo beddelaa magacaaga isticmaale ee Twitter? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sidee loo beddelaa magacaaga isticmaale ee Twitter?
Waxaa laga yaabaa 11, 2021 0 comments 432
Barnaamujyada warbaahinta bulshada ayaa shaki la’aan ah habka ugu muhiimsan ee xiriirka ka dhexeeya aadanaha. Iskusoo wada duuboo, tirada badan ee macluumaadka aad ka heli karto awgeed, laga bilaabo nolol maalmeedka xiddiga ama cayaaraha, illaa wararka dhacdooyinka wararka ee ka dhaca meel ka mid ah meeraha.
Shaki la'aan, dadku waxay marka hore u jeestaan ​​astaamahooda Facebook ama Twitter si ay u ogaadaan wax kasta oo dadka raacsan ama dadka ay daryeelaan ay sameynayaan, ka hor inta aysan xitaa tixgelin wicitaan taleefan ama fariin qoraal ah. Gaar ahaan haddii ay yihiin xisaabaadka dadka caanka ah ee dalabkaas ku jira.
Marka tan tan waxay u baahan yihiin inay ogaadaan magaca isticmaalaha astaamaha ay raadinayaan. Magacani waa kan ugu habboon ee laga dhex heli karo badweynta magacyada ka diiwaan gashan server-yada Twitter-ka.
Muhiimadda magaca isticmaalaha
Aqoonsiga ay adeegsato Twitter-ka, sida shabakadaha bulshada oo kale, si ay u kala soocaan dhammaan adeegsadayaasheeda, waxaa loo yaqaan 'username'. Lama wadaagi karo dadka isticmaala, waa mid gaar ah oo aan la wareejin karin. Haddii waqti kasta oo aad dareento baahida loo qabo in la beddelo magacaaga isticmaale, nidaamka ayaa ah waxa ugu fudud ee aad sameyn karto.
Waa in isticmaaleyaal badani ay diiwaangeliyeen koontooyinkooda mararka qaarkood heerkooda qaangaarnimo ay ka dhigtay inay dhigaan hal ama magac kale oo ayan mar dambe jeclayn, markaa waxay rabaan inay mid kale oo dheeri ah la jaan qaadaan da'dooda hadda.
Sidee loo sameeyaa magaca isticmaalaha?
Thanks to username, taageerayaashaadu waxay awoodaan inay ku aqoonsadaan oo kaa soocaan noocyada kale. Dhinaca kale, waxaad u adeegsaneysaa inaad gasho koontadaada oo ay la socoto lambarkaaga sirta ah. Waxay ka kooban tahay qaab-dhismeedka Twitter-ka ee caadiga ah, oo ka kooban astaanta iyo mid kale ama laba erey oo ku lifaaqan.
Kahor intaadan magacaabin, isweydii waxyaabaha soo socda
Mar alla markii aad beddesho magaca koontadaada, waxaa si otomaatig ah loogu cusbooneysiin doonaa muuqaalkaaga muuqaalka, marka dhammaan taageerayaashaadu waa inay ka feejignaadaan isbeddelkan, haddii ay ku wareerto magacan cusub, waxayna go'aansadeen inay joojiyaan inay ku raacaan.
Sidoo kaleDhammaan Tweets-ka iyo farriimaha dadweynaha ee aad samaysay, beddelka magaca isticmaale ayaa sidoo kale lagu soo bandhigi doonaa.
Baro sida loo badalo magaca isticmaalahaaga
Tag arjiga iyo / ama bogga websaydhka Twitter oo gal.
U gudub qaybaha iyo asturnaanta koontadaada. Waxaad ka heli kartaa adoo galaya sawirkaaga muuqaalka ah ee barnaamijka ama adigoo riixaya "xulashooyin dheeri ah" dhinaca bidix ee isugeynta koontadaada.
Waa inaad heshaa "Koontadaada" gudaheeda "dejinta iyo asturnaanta". Markaad gasho, hel qaybta "username". Waxaad ka heli doontaa goob maran ama sanduuq aad ku cusbooneysiin karto magaca. Intaad samaynaysid, nidaamku wuxuu kugula socodsiin doonaa adiga oo adeegsanaya calaamadda oggolaanshaha, helitaanka magaca.
Iskuday inaad qorto username ka duwan kan kale, adoo u eegaya dookhaaga. Mar alla markii aad magaca beddesho, midka aad beddeshay waxaa laga heli karaa barxad uu adeegsade kale adeegsado, markaa ma awoodi doontid inaad mar labaad isticmaasho.
Dhammeystir magaca beddel adigoo riixaya "xariifnimo".
1 Muhiimadda magaca isticmaalaha
2 Sidee loo sameeyaa magaca isticmaalaha?
3 Kahor intaadan magacaabin, isweydii waxyaabaha soo socda
4 Baro sida loo badalo magaca isticmaalahaaga
Sidee looga hortagaa in fiidiyowga YouTube-ka la joojiyo?
Daabacadaha Sideen ugu sameeyaa miirayaasha barta Instagram?